Global Voices teny Malagasy » 20 Taona Aty Aorian’ny Tsy Fanamelohana ny Fanambadian’ny Mitovy Fananahana Ao Ekoatora, Mbola Voasazy Foana Ny Vondrom-piarahamonina LGBTI · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Avrily 2018 16:42 GMT 1	 · Mpanoratra Carlos Flores Nandika (en) i Lindsey Mulholland, Ntsoa
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Mediam-bahoaka, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Ity manaraka ity dia famerenana tatitra iray nosoratan'i Carlos Flores, izay nivoaka voalohany tao amin'ny Connectas  ary naverina nosoratana niaraka tamin'ny fanampian'ny mpanoratra azy ho ampahany amin'ny andian-dahatsoratra telo izay ho avoaka sy ho adikan'ny Global Voices. Mirakitra fijoroana vavolombelona hafa amin'ny antsipirihany sy fanadihadiana momba ny tsy fanarahan-dalàna izay manamora ny herisetra sy ny fanavakavahana miantefa any amin'ireo olona pelaka sy sarin-dahy / sarim-bavy ao Ekoatora ilay tatitra feno.
Roapolo taona taty aorian'ny tsy fanamelohana ny fanambadian'ny mitovy fananahana ao Ekoatora , mbola voasazin'ny fiarahamonina foana ny vondrom-piarahamonina LGBTI sady zara raha arovan'ny lalàna. Maka endrika maro ny fanararaotana sy ny fanavaakavahana, ataon'ireo fikambanana izay tsy tratry ny fanarahamason'ny fanjakana. Tazonin'ny sasany amin'ireo fikambanana ireo ny filazana azy ho klinika fanalàna amin'ny zava-mahadomelina; raha ny marina anefa, manao “fitsaboana” ho an'ny fanambadian'ny mitovy fananahana izy ireo, maro ary amin'ny endriny samihafa ireo fanararaotana mitranga any anatin'ireny klinika ireny.
Nahatonga fijoroana amin'ny alalan'ireo asa toy ity an'i Paola Paredes ity  ireo fijoroana vavolombelona sasany avy amin'ny niharam-boina, izay namboraka ireo fampijaliana samihafa nihatra tamin'ireo vehivavy tany amin'ireny klinika ireny. Asehon'ireo fijoroana vavolombelona sasany ny fomba fandraisana andraikitra nataon'ireo fianakavian'ny niharam-boina miaraka amin'ireo klinika, sy ny hamaroan'ireo vehivavy entin'ireo fikambanana ara-pivavahana ho ampidirina any.
Manamarina ny Fundación Causana  (ny Fikambanana Causana), “fikambanana vehivavy tia vehivavy sy miaro ny vehivavy”, izay miady ho fiarovana ireo olona LGBTI, fa teo anelanelan'ny taona 2016 sy 2017 fotsiny, efa niasa taminà tranga 8 momba ny fisorohana ny fanokana-monina izy. Tsy dia niova firy ny toe-piainana ara-tsosialy miantraika amin'ireo olona izay matetika iharan'ny tranga toy izany na teo aza ny fivoaran'ny lalàna. Ka noho izany, mbola lavitra ny fanakatonana ny boky mandrakitra io olana io i Ekoatora, na voatonona aza fa manokatra ny varavarana ho an'ny fanajana sy ny fitovian'ny rehetra ny lalàna amin'izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/05/115401/
 tsy fanamelohana ny fanambadian'ny mitovy fananahana ao Ekoatora: https://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_same-sex_unions_in_Ecuador
 ity an'i Paola Paredes ity: https://globalvoices.org/2017/05/22/a-photographer-recreates-the-abuse-women-suffer-at-illegal-conversion-therapy-clinics-in-ecuador/